Iyintoni Isicwangciso SikaThixo Sokusindiswa eBhayibhileni?
Ukucaciswa Kulula Kokusindiswa KweBhayibhile
Ngokucacileyo, icebo likaThixo losindiso luyintando yesintu ebhalwe kwiphepha leBhayibhile.
Ukusindiswa kweBhayibhile yindlela kaThixo yokubonelela abantu bakhe kwisono nokufa ngokomoya ngokuguquka nokholo kuYesu Kristu. KwiTestamente Endala , umgaqo wosindiso ususelwe ekuhlanguleni kukaSirayeli kwiYiputa kwiNcwadi yeEksodus . ITestamente Entsha ibonisa umthombo wensindiso kuYesu Kristu .
Ngokukholwa kuYesu Krestu , amakholwa asindiswa kwisigwebo sikaThixo sesono kunye nesiphumo-ukufa okuphakade.
Xa uAdam noEva bevukela, umntu wahlukana noThixo ngenxa yesono. Ubungcwele bukaThixo bufuna ukuhlawulwa kunye nokuhlawula ( ukucamagushela ) isono, okwakunjalo (kwaye kusekhona) ukufa kwangunaphakade. Ukufa kwethu akwanele ukufihla intlawulo yesono. Isibingelelo esipheleleyo, esingenasici , esinikwe ngendlela efanelekileyo, sinokuhlawula isono sethu. UYesu, umntu othembekileyo kaThixo, weza ukunikela ngesondlo esicocekileyo, esipheleleyo nangunaphakade ukususa, ukubonela, nokwenza intlawulo engunaphakade yesono. Ngoba? Ngenxa yokuba uThixo uyasithanda kwaye unqwenela ubuhlobo obusondeleyo nathi:
Indlela Yokufumana Uthando Olutshintsha Konke
Indlela Yokufumana Isiqinisekiso Sokusindiswa
Ukuba uvakalelwe "ukukhwela" kukaThixo entliziyweni yakho, unokufumana isiqinisekiso sosindiso. Ngokuba ngumKristu, uya kuthatha elinye lamanyathelo ebalulekileyo ebomini bakho emhlabeni kwaye uqale i-adventure ngokungafani nayiphi na enye.
Ikhwelo lensindiso luqala noThixo. Uyilungisa ngokususa okanye ukusikhupha ukuba size kuye:
Kuthetha ukuthini ukuzalwa kwakhona?
Indlela Yokuya Ezulwini
Unokufuna ukwenza impendulo yakho kwifowuni kaThixo yensindiso ngomthandazo. Umthandazo uthetha nje noThixo.
Unokuthandaza ngokwakho, usebenzisa amagama akho. Akukho ndlela ekhethekileyo. Sithandaze nje entliziyweni yakho kuThixo kwaye uya kukusindisa. Ukuba uziva ulahlekile kwaye ungazi nto ukuthandaza, nango umthandazo wensindiso :
Isipho sikaThixo - Inkondlo yoSindiso
Umgaqo weRoma ubeka isicwangciso sosindiso ngokusebenzisa uluhlu lweendinyana zeBhayibhile ezivela kwincwadi yamaRoma . Xa kulungiswe ukulandelelana, ezi ndinyana zenza indlela elula, echanekileyo yokuchaza umyalezo wosindiso:
Nangona kuphela isampuli, nango maZibhalo ambalwa okusindiswa:
Yohane 3: 3
Yohane 3: 16-17
IZenzo 16: 30-31
1 kwabaseTesalonika 5: 9
UYesu Krestu ubaluleke kakhulu ebuKristwini nasekufeni bakhe, isigidimi kunye nobulungiseleli bahlala kwiincwadi zeVangeli zeTestamente eNtsha. Igama elithi "uYesu" livela kwigama lesiHebhere-Aramaic elithi "Yeshua," elithetha ukuba "uYehova [iNkosi] usindiso."
Abangathembeki banokuphikisana nobungqina bombhalo okanye baphikisane nobukho bukaThixo, kodwa akukho mntu unokukhanyela amava ethu kunye naye. Yilokho eyenza amazwi ethu okusindiswa, okanye ubungqina, bunamandla.
Xa sichaza indlela uThixo asebenze ngayo ummangaliso ebomini bethu, indlela asisikelele ngayo, wasitshintsha, wasikhupha waza wasikhuthaza, mhlawumbi aze aphule aze asiphilise, akukho mntu unokuphikisana okanye ukuphikisa.
Siya ngaphaya kommandla wolwazi kummandla wobudlelwane noThixo:
Funda Ubungqina boBomi-Ubomi
Xelela ibali lakho losindiso
Funda Ukubhala Ubungqina Bakho BamaKristu
Uthando Luka-Agape eBhayibhileni?
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngama-Igneous Rocks
IQiniso EliQine Elixabisekileyo
Iingoma ezi-13 ze-Weezer
Ukuzimela kweMexico - Ukuvinjelwa kweGuanajuato
Ukukhusela iPhuseleko lePinstitute nje njengeNtsomi
Ukuba uthengisa Umdwebo, Ngaba Ulahlekelwa Imvume?
Ukuphungulwa kweeGoli eziphantsi kweGoli
Izandla zeSabbat yeSabbat